Faa'iidooyinka Basbaaska cas ee aadan ogeyn – Beegsonews-Wararka maanta
Home Caafimaadka Faa’iidooyinka Basbaaska cas ee aadan ogeyn
Haddii aad taageere u tahay dhadhanka kala duwan ee cuntooyinka, waa inaadan hilmaamin isticmaalka budada basbaaska cas, maadaama ay ku dareyso dhadhan kaladuwan, oo ay leedahay faa’iidooyin caafimaad oo dhowr ah, taas oo kaa dhigaysa inaad ku dhiirrato halista kuleylka si aad u hesho faa’iidooyinkaas cajiibka ah iyo kuwa gaarka ah.
Markaad cuno cuntada Mexico, Indian ama Thai waxaad ka heli doontaa budada basbaaska cas si xoog leh oo ay ku siin karaan dhadhanka dhadhanka kala duwan.
Ka sokow dhadhankeeda gaarka ah, basbaaska cas ayaa loo yaqaan doorka firfircoon ee kicinta wareegga dhiigga iyo sidoo kale inay tahay bakteeriyada dabiiciga ah.
Ka hortag boogaha caloosha
Basbaaska gaduudan waxaa loo yaqaanaa inuu yahay warbixin khaldan oo keenta boogaha caloosha, laakiin daraasaadka sayniska oo lagu sameeyey ayaa cadeeyay inuu ka hortago uuna dilo bakteeriyada iyagoo kiciya unugyada caloosha si ay u xafidaan walxaha ka ilaaliya.
Daraasadaha ayaa sidoo kale muujiyey in ku dadaalida cunida basbaaska casaanka ah iyo ukun (omelette) subaxdaadu ay wanaajiso caafimaadka wadnahaaga. Taas oo yareynaysa halista wadne istaagga, sambabbashada sambabada iyo istaroogga.
Haddii ka dib cunista basbaaska kulul aad dareento kuleylka iyo kuleylka, waa sababta oo ah jirkaagu wuxuu cunaa kaloriyo si uu u soo saaro tamar.It waxaa la ogaaday in xitaa basbaaska cas ay ku jiraan maadooyin si weyn u kordhiya jiilka kulka (soosaarka kuleylka) iyo isticmaalka oksijiinta wax ka badan 20 daqiiqo ka dib cunista. .
Wuxuu nidaamiyaa sonkorowga
Markaad cuno basbaaska jiilaalka iyo dhir udgoon, waxaad noloshaada ka dhigeysaa mid caafimaad leh maxaa yeelay waxay gacan ka geysaneysaa yareynta halista heerarka insulinta dhiigkarka, waa cilad la xiriirta nooca 2aad ee sonkorowga.
Markaad qaadatid laba qaado oo ah budada chili, waxay siisaa qiyaastii 6 boqolkiiba qiimaha maalinlaha ah ee fitamiin C, iyo sidoo kale in ka badan 10 boqolkiiba qiimaha maalinlaha ah ee fitamiin A, oo loo yaqaan fitamiin ka hortagga firfircoon, sida lagama maarmaanka u ah xuubka xabka, kaasoo ah xariiq. Marinnada sanka, sanbabada, xiidmaha iyo kaadi mareenka, waxay u adeegayaan safka ugu horeeya ee jirka ka difaaca jeermiga.
Previous articleRuushka: 14 heshiis la galey Sacuudiga oo ku kacaya lacag dhan 3 bilyan oo doollar
Next article6 cunno oo maskaxdaada kobciya caafimaadkeeda